होसियार! कोरोना बिरुद्ध भन्दै नेपालमै पाइन थाल्यो नक्कली खोप, यसरी खुल्यो रहस्य – Sandesh Press
June 28, 2021 214
नेपालमा अहिले सबै कोरोना बिरुद्धको खोपको प्रतिक्षामा छन् । कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा लगाएकाहरु दोश्रो मात्राको प्रतिक्षामा छन् । यही अभावको मौका छोपेर कोरोना बिरुद्धको खोप कोभिशिल्ड भन्दै लुकीछिपी नेपालमा नक्कली खोप बेचिँदै आएको पाइएको छ ।
कोभिशिल्ड भन्दै लुकाएर बिक्री हुने गरेको नक्कली खोपबारे खोज गरेर तत्काल छानविन गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च ध्यान आर्कषण गराएको छ । मञ्चले आफुलाई सूचना प्राप्त भएको भन्दै विज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विज्ञप्ति निकालेरै पूर्वी नाकाहरुबाट काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रहरुमा ल्याइ अ बै ध रुपमा कोविशिल्डको खोप भन्दै लुकी छिपी ३ हजार देखि ५ हजार सम्ममा बिक्रि बितरण भइरहेको गोप्य सूचना केही चिकित्सकहरुले दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
Prevनिजी सवारीझैँ जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी खुलाउने तयारी, आज निर्णय गरिने
Nextतपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ४ सामान्य गल्ती !
चर्चित कलाकार लक्ष्मी गिरीलाई फेरी किन रुँदै हिँड्नु पर्यो ?
भर्ती हुन तयार हुनुहोस् सशस्त्र प्रह’रीमा खुल्दै छ ४ हजार भन्दा बढी नयाँ भर्ना